नेपाली कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, भाषा सिक्दा यी कुराहरु ख्याल गर्नुहोस् ? – ताजा समाचार
नेपाली कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, भाषा सिक्दा यी कुराहरु ख्याल गर्नुहोस् ?
काठमाडौं । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको जापान रोजगारबारे नयाँ जानकारी आएको छ । नेपालीहरुको आर्कषणका रुपमा रहकेो जापानमा जानको लागि भाषा परीक्षाका बारेमा नयाँ अपडेट आएको हो । नेपाल र जापानबीच गएको चैतमा श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार जापानले निर्धारण गरेका १४ वटा कामका क्षेत्रमध्ये अहिलेलाई ‘नर्सिङ केयर गिभर’को काममा नेपाली कामदार लैजाने जानकारी दिएको छ ।
जापानले लैजाने ‘स्पेसिफाइड स्किलड वर्कर’ का लागि भाषा र सीप दुवै परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने हुन्छ । नर्सिङ केयरगिभरको काममा जानका लागि भाषा परीक्षामा इच्छुक सबै सहभागी हुनसक्ने ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नर्सले मात्र परीक्षा दिन पाउने र उनीहरु मात्र परीक्षाका लागि योग्य हुने होइन, नर्सिङ केयरगिभरको काम भएकाले इच्छुक सबैले भाषा र सीप परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् । सीप परीक्षणमा पनि कामसँग सम्बन्धित भाषा नै परीक्षण हुन्छ ।’
हिजोआज जापानी भाषा सिकाउने थुप्रै केन्द्रहरु खुलेका छन् । तर अबदेखि जथाभावी भाषा नसिक्नुहोस् । जापानी भाषा सिकाउनका लागि जापानमै गएर प्रशिक्षण लिएर आएका प्रशिक्षक मात्र अबदेखि भाषा सिकाउन योग्य हुनेछन् । त्यसका लागि केन्द्रहरुलाई निवेदन दिएर भाषा सिकाउने प्रशिशिक्षकलाई तालिमका लागि पठाउन जापान फाउण्डेशनले आह्वान पनि गरेको छ ।
जापान सरकारले त्यसका लागि गएको सोमबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै जापान गएर एक महिनाको भाषा प्रशिक्षण लिएर आएको शिक्षक मात्र नेपालका तालिम केन्द्रमा पढाउन योग्य हुने जानकारी गराएको छ । जापान जान चाहनेलाई आधारभूत र एन ४ तहको भाषा आवश्यक पर्छ । जापानले अहिले क्षेत्रको टुंगो लगाएको भए पनि कति लिने र कहिले देखि लिने भन्ने कुरा निर्णय भएको छैन ।